Uzo ozo di na NERO ka isure CD na DVD maka Linux | Site na Linux
Uzo abuo nke NERO maka oku CD na DVD maka Linux
AnaGaby_Clau | | Aplicaciones, GNU / Linux
Anyị na-eji CD na DVD eme ihe pere mpe, n'ihi na anyị akwagala na Blu-Ray na USB, mana ha na-aga n'ihu gburugburu anyị. O yikarịrị ka ọtụtụ n'ime anyị nwere ọtụtụ afọ nke ọrụ, egwuregwu, egwu na ihe nkiri na-akwado na diski ndị a, ọtụtụ ndị ka na-ejikwa ha kwa ụbọchị.
Iji maa atụ, mgbe m na-arụ ọrụ na mmekọrịta ọhaneze, ha bara nnukwu uru iziga ndị nta akụkọ ozi na ụzọ adịghị ọnụ. Ọ ka bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ikpe ndị a. Ọ dịkwa mma ịme ihe egwu maka onye òtù ezinụlọ ma ọ bụ enyi, ebe ọ bụ na ụfọdụ ụgbọala ka nwere ndị ọkpụkpọ CD. Na ndị sayensị kọmputa ha nwere ike ịba uru mgbe ha chọrọ iji dochie sistemụ arụmọrụ na kọmputa ochie, ebe USB anaghị arụ ọrụ.
Ihe ọ sọrọ ya bụrụ ya kpatara ya, enwere ike nke ahụ Ka anyị gaa n’ihu iji CD / DVD draịva maka afọ ndị na-abịa; na ndị kwagara imeghe ihe ngwanrọ na-adaba adaba iji nweta ngwaọrụ iji gbaa diski ọkụ. Ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị mmemme ole na ole, dị iche na Nero, nke nwere ike inyere gị aka ugbu a ị nwere GNU / Linux operating system.
1.1 Etu esi etinye Brasero
2.1 Etu esi etinye K3b
Ezubere site na Gnome ma kesaa maka GNU / Linux, Brasero ọ na atụmatụ a zuru ezu ezu GUI interface ike a dịgasị iche iche nke discs. Mgbe ị mepere ya na nke mbụ ya, ọ na-ewetara gị usoro nke nhọrọ iji mepụta ọdịyo, vidiyo ma ọ bụ diski data; nakwa dị ka ị pụrụ 1: 1 mbipụta nke dị discs. Ọ gụnyere nchịkọta akụkọ mkpuchi, nke na-adịghị oke dị ka mmemme maka ịmepụta mkpuchi ma ọ dị mma na ọ nwere ya. N'ikpeazụ, ihe dị mma banyere Brasero bụ interface ya na expansions, nke na-enye ohere ịgbakwunye ngwaọrụ dị iche iche iche.
Etu esi etinye Brasero
Anyị nwere ike ibudata Brasero site na:
Ebe nchekwa Brasero (HTTP): http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/brasero/3.12/brasero-3.12.1.tar.xz
Ebe nchekwa Brasero (FTP): ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/brasero/3.12/brasero-3.12.1.tar.xz
Nkwado nke Brasero chọrọ
gst-plugins-isi-1.8.3, ihe ndozi-2.0.2, libcanberra-0.30 y tinye-0.7.6
Mgbe ahụ anyị wụnye Brasero na-eso iwu ndị a:
./configure --prefix = / usr \_ --enable-compile-ịdọ aka ná ntị = mba \_ --enable-cxx-ịdọ aka na ntị = mba && eme
Na-esote dị ka onye ọrụ root
Maka ndị kwekọrịtara na ụwa KDE, K3b (nchịkọta nke KDE Burn Baby Burn) bụ nnukwu ihe ọzọ. Dị ka Brasero, K3b dakọtara na ụdị dị iche iche na ụdị nke diski, yana usoro nke ngwa ọrụ na iwu a ga-eji na mmemme niile. Nke a na - enye gị ohere ịchịkwa usoro nke ịmepụta diski. Na isi, K3b bụ ezigbo mma interface.
Sọftụwia a enwetabeghi mmelite nso nso a, mana nke dị ugbu a na-agbanwe agbanwe yana ọtụtụ ngwaọrụ. N'ihi ya, ọ kwesịghị ịbụ nchegbu maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Etu esi etinye K3b
na chọrọ iji wụnye K3b dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya, ozugbo anyị wụnyechara ihe ndị dị mkpa
Anyị na-ebudata koodu isi site na K3b ibudata peeji
Anyị wepụtara koodu isi na ndekọ na mmasị anyị:
# mbge -xjvf k3b-1.0.tar.bz2
Anyị na-agbanwe na ndekọ ndekọ nke anyị mepụtara:
Anyị na-ahazi koodu ahụ:
#. / hazie
Site na nsụgharị K3b gara aga ọ dị mkpa ịnye prefix, mana usoro nchịkọta KDE ọhụrụ nwere ike ịkọ ya n'ụzọ ziri ezi
Ọ bụrụ na iwu ahụ dị n'elu anaghị atụba njehie ọ bụla, anyị na-aga n'ihu ịwụnye K3b, dịka onye ọrụ mgbọrọgwụ
# su -c "wụnye"
Nwere ike ugbu a ịmalite iji k3b, nke nwere ike ịchọta na ngalaba multimedia nke ngwa ngwa gị
Ọ dị mma, enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ na Nero, m chere na ụzọ a dị ezigbo mma, mana ọ bụrụ na ị nwere aro ọzọ anyị ga-achọ ịma ya. Ekekọrịta anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Uzo abuo nke NERO maka oku CD na DVD maka Linux
ka ndi mmadu na-eji nero?
Kemgbe m hapuru XP enyela m ya ka onwu
Ọfọn, ha na-eji ya, mana echere m na e nwerelarị ihe ngwọta dị mma karịa Nero, ọ bụ ezie na nke a ka bụ ihe kachasị ewu ewu .. Ugbu a maka sọftụwia n'efu, brasero dị mma
Zaghachi Luigys Toro
N'ezie ee hahaha, enyekwara m ya maka nwụrụ anwụ, na ọ ka bụ onye kachasị ewu ewu, n'eziokwu ugbu a enwere m obi abụọ.
N'aka nke ọzọ, mgbasa ozi ngwa anya na-ewere oche azụ, ọbụlagodi na bluray ị nwere ike ịlele ihe nkiri site na nkwanye. Onwe m, arọọla m USB, SD na ihe ndị ọzọ ịme formatting na ọtụtụ ihe.
Zaghachi na Taịl
Ezigbo ederede, k3b zuru ezu karịa complete
N'afọ m ebe m gbara ọtụtụ DVD maka mgbanwe xD ejiri m k3b ọtụtụ, ọ dị mma, n'ihi na m na-eji Gnome eme ihe, echeghị m ịwụnye ụlọ akwụkwọ Kde ole na ole ma ọlị, ihe adịghị mma na brazier, anaghị m enwekarị DVD9, yabụ Ana m eji K3b, ugbu a anaghị m eji DVD ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịdekọ ihe m na-eji iwu ahụ.
Ndị Hermen dijo
Dị ka m, ana m ahọrọ K3b karịa Brasero ọbụlagodi na-arụ ọrụ na GTK gburugburu ... N'otu ụzọ ahụ, ha abụọ dị mma ...
CD na-ere ọkụ ma ọ bụ DVD n'okpuru Linux dị obere (enwere ike ime ya ọbụlagodi shei). Mana idekọ Bluray site na iji mmemme Linux nke ọma, iji kwuo nke kachasị, dị mgbagwoju anya.
M na-eji imgburn, nke bụ maka Windows mana arụ ọrụ 100% na mmanya na Linux.
Brasero na-abịa na ndabara na ọtụtụ mfe distros, ọ na-arụ ọrụ na-enweghị ọtụtụ lapses, ị nwere ike gbaa iso na diski gị ma mee 300 mkpụrụ nke CD ma ọ bụ DVD, K3b zuru oke ma ọtụtụ n'ime ha anaghị eji ikike ha zuru oke. nke brasero na K3b nke amarala nke ọma taa, ịdekọ na ebe nchekwa dị ngwa na ịdị mfe. Cheers
Aurelio janeiro dijo
Ọ ga-amasị m ịjụ ajụjụ. Mgbe m mere oyiri (ngwakọta egwu na usoro mp3), m na-eme ya (mgbe ị na-eji Windows) site na Realplayer. O nwere uru nke inyefe faịlụ faịlụ niile na CD. Nke ahụ bụ, mgbe a na-akụ egwu na CD ụgbọ ala, dịka ọmụmaatụ, ozi aha abụ ga-apụta. Mmemme abụọ a (Brasero na K3b), ha na-eme otu ihe ahụ?
Zaghachi Aurelio Janeiro
Ọ dị m ka m gara oge gara aga mgbe m na-agụ post a, site n'aka Brasero na site na nseta ihuenyo nwere agba aja aja nke Ubuntu ochie.
Echere m na ị na-ekwu ya maka Nero
M na-eji Brasero, ọ dịworị na mbipute 3 na Ubuntu na ọ na-enye ohere ịme mkpokọta ọdịyo (nke na-enweghị ike maka redio cd toro eto) ebe naanị egwu ole na ole dabara ruo oge nchịkọta data (ya na faịlụ mp3). N'okwu abụọ a na aha faịlụ zuru ezu, ọ bụ ezie na ọ dabere na ike redio iji gụọ aha faịlụ ma ọ bụ Tags ejiri na mp3.
Ọfọn, ejirila m mmemme abụọ na Brasero, nke dị mfe iji, enwere m ụfọdụ nsogbu dịka ndekọ ndị na-emepụtabeghị ma ihe ndị dị ka nke m tara ahụhụ na k3b mgbe ọ dị ka ọ dị obere nghọta karịa Brasero. M ga-anọ na duel a na-eche n'echiche na anyanwụ na K3b. Ekele m onye ọ bụla,
Onwuchekwa mcfly dijo
Ọ ga-amasị m ịmata ihe ị chere gbasara Xfburn; ekwughi ya n’isiokwu a ma bu ndabara na Xfce… O di njo ghara ikwu ya? Ma ọ bụ na ọ dịghị onye maara ya?
Zaghachi Marty Mcfly
Ọ dịghị njọ ma ọlị, ọ na-enye ohere ịrụ ọrụ nke ọma (yana oge ole m jiri ya, ọ rụworo m ọrụ).
Ndi Brasero na Xfce na aru oru? Xfburn na-enyefe ozi nke mkpado emetụtara na mp3?
Enwere m ezigbo ahụmịhe naanị na k3b. Brazier Enweghị m mmasị, mana ọ bụghị nke kacha njọ.
Jorge Rafael Almeida Orellana dijo
k3b nwere nsogbu na ọsọ ndekọ nke blu ray, ọ bụ ya mere 100 ugboro ngwa ngwa bụ Xfburn (akwadoro)
Zaghachi Jorge Rafael Almeida Orellana
Ndewo, m wunye Brasero na #yum wee gbaa ya mana enweghị m ike ire ma ọ bụ chekwaa faịlụ na CD.
Onwere onye n’ime unu ga - enyere m aka na nke a?
Nyochaa arụmọrụ nke GNU / Linux gị na ederede PHP a
MATE 1.16 dị na ndozi na ndakọrịta GTK3 +